फिल्ममा जर्मन अभिव्यक्तिवाद र टिम बर्टनको काममा यसको प्रतिबिम्ब क्रिएटिव अनलाइन
टिम बर्टनको काममा सिनेमामा जर्मन अभिव्यक्तिवाद र यसको प्रतिबिम्ब
सातौं कलाको संसारको बारेमा कुरा गरिरहेको लेखलाई लामो समय भयो, त्यसैले आज म धेरै पुन: निर्माण गर्न जाँदैछु। तपाईं धेरैलाई थाहा छ, म कामको फ्यान हुँ टिम बुर्टन र म विश्लेषण गर्न समर्पित कुनै लेख ढिला गर्न जारी गर्न सक्दिन (अन्तरिक्ष को कारण को लागी एकदम सरल, हो) उसको सौन्दर्यशास्त्र र आफ्नो प्रविधिको जग। विशेष गरी आज म हाम्रो कलाकारले प्राप्त गरेको धेरै प्रभावहरू मध्ये एउटामा ध्यान केन्द्रित गर्ने छु विशेष गरी जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूलको प्रभावमा।
म तपाईंलाई सम्झाउँछु अभिव्यक्तिवाद यो एक कलात्मक प्रवृत्ति हो जसको आधारशिला र आधार अवधारणा अत्यधिक, स्वच्छ, मानवीय भावनाहरूको अभिव्यक्ति हो र उद्देश्य र तर्कसंगत प्रतिनिधित्वबाट टाढा छ। हुनसक्छ यो नै त्यस्तो चीज हो, यसले मानव, न्यानो र आदिम चरित्रलाई समावेश गर्दछ। वास्तविकता (वा हामीलाई के भनिएको छ वास्तविकता हो) फरक पर्दैन। के महत्त्वपूर्ण कुरा मानव र व्यक्तित्वहरूको भित्री र आन्तरिक आयाम हो। तपाईं सबै लागतहरूमा र सबै भन्दा कलात्मक रणनीति र तत्व प्रयोग गरेर भावना प्राप्त गर्न खोज्नुहुनेछ। तल म यस वर्तमानको परिभाषित विशेषताहरूको श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछु। यदि म यी प्रकारका लेखहरू तपाइँमा चासो जगाउने देख्दछु भने म सिनेमा र कथा विश्लेषणको बारेमा अधिक लेख्छु। सबै भन्दा पछि, सिनेमा डिजाइनको एक रूप हो र यसको ग्राफिक्ससँगको जडान पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष छ।
3 प्राकृतिक परिदृश्य र अध्ययन
8 टिम बर्टन र अभिव्यक्तिवाद
अभिव्यक्तिवादले परिदृश्यलाई प्रदान गर्ने उपचार सम्भवतः यसको प्रवचनको अभिव्यक्तिपूर्ण रणनीतिको एक महत्वपूर्ण केन्द्रक हो। सामान्यतया, फिल्महरू सेटहरूमा चित्रित गरिन्थ्यो र खाली ठाउँहरूलाई वास्तविक गहिराइले व्यवहार गर्दैनथ्यो बरु पृष्ठभूमिमा चित्रित ब्याकड्रप प्रयोग गरिन्थ्यो। तिरछा लाइनहरु असम्भव परिदृश्यहरु को लागी, लगभग भूलभुलैया। शाफ्टहरू सर्पिल आकृतिहरूले अस्थिर वातावरण प्राप्त गर्न, भ the्गको कगारमा ठाँउ तोडेको थियो। परिदृश्यहरूले एक मनोवैज्ञानिक चरित्र, पात्रहरूको भावनात्मक प्रतिनिधित्व र कथाको आफ्नै आभास प्राप्त गर्‍यो। यस तरिकाले यो प्रतिनिधित्व गरिएको थियो मानव मानस को जटिलता र व्यक्तिको बिभिन्न आन्तरिक प्लेनहरू। तिनीहरूको राम्रो उदाहरणहरू वास्तविक थिए वा बिहानदेखि मध्यरातसम्म। त्यहाँ लै Lang्गको मेट्रोपोलिस जस्तो अपवादहरू पनि थिए जुन प्राकृतिक सेटिंग्समा शूट गरिएको थियो। आजकल, डिजिटल र कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगको साथ, सिर्जनाको क्षमता धेरै बढेको छ।
लाइट्स र छायाको बीचको भिन्नतालाई जोड्नको लागि टेलिभिजनको रूपमा चिइरोस्कोरो बुझीयो। अभिव्यक्तिवादको रोशनीको पूर्ववर्ती म्याक रेइनहार्डको थिएटरहरूको रोशनीमा छ। फार्मलाई रेखांकित गर्न र त्यसलाई बढाउनको लागि प्रकाश चरणको आधारमा केन्द्रित थियो गिड्डी, अनियन्त्रित र मानव भावना एउटै समयमा। चरणहरूको छेउमा ठूला प्रोजेक्टरहरूको प्रयोग र ठूला अनुमानहरूका साथ सेटको डिजाईनले कार्यलाई सजिलो बनायो। राम्रो उदाहरण मेट्रोपोलिस वा ला म्युर्टे थकित, दुबै एफ। लांग द्वारा हुनेछ। यो लक्षण धेरै जसो टिम बर्टन फिल्महरूमा देखा पर्दछ।
प्राकृतिक परिदृश्य र अध्ययन
अन्तरिक्षको अभिव्यक्तिवादी अवधारणा एकदम चाखलाग्दो छ। हाम्रो कलाकारहरूको लागि यो अक्षरहरूको विस्तार बाहेक अरू केही थिएन। अन्तरिक्ष उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्राणीहरूको अर्को आयाम थियो र दुबै अविभाज्य एकाई बने। नायकहरू र तिनीहरूले कब्जा गरेको ठाउँ बीचमा अवस्थित थियो धेरै आदिम, गहिरो, घनिष्ठ सम्बन्ध; दर्शकसँग मनन गर्ने र बसोबास गर्ने भाग्य छ। दुबै तत्वहरूको बिचमा सही कुराकानी कृत्रिम परिदृश्यको निर्माणबाट उत्पन्न भएको थियो जुन व्यक्तिको आन्तरिक ब्रह्माण्डको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। यो कार्य गर्दछ जुन हामीले पहिले नै एउटा अत्यन्त चरम तत्व, महत्त्वपूर्ण शक्ति र अभिव्यक्तिको शक्तिको रूपमा भनेका छौं जुन हामीले उपेक्षा गर्नु हुँदैन। यी निर्माणहरूको लागि धन्यवाद हामी भावनात्मक ब्रह्माण्डमा शाब्दिक रूपमा प्रवेश गर्न सक्दछौं, हाम्रो आंकडाको सबैभन्दा ईथरिक वा अमूर्त मामलामा, हामी तिनीहरूलाई साँच्चै बुझ्न सक्दछौं, वा अझ राम्रो, हामी उनीहरूले महसुस गरेको महसुस गर्न सक्दछौं, उनीहरूको घनिष्ट भावनाहरूको पूर्ण स्पष्टताका साथ अनुभव गर्न सक्दछौं। सामान्यतया, निर्माण र कलात्मक हेरफेरको सम्भावनाका कारण तार्किक रूपमा अध्ययन अन्तर्गत निर्माणहरू र सेटि developहरू विकसित गर्ने प्रवृत्ति थियो, तर त्यहाँ केही अपवादहरू पनि छन्।
पात्रहरूको कन्फिगरेसनको अधिक रोमान्टिक साहित्यको साथ सीधा सम्बन्ध छ। अस्पष्टता, दोब्बर र बहुमुखी प्रतिभा यस निर्माणमा आवश्यक सुविधाहरू हुनेछन्। प्रेम प्रभावको मुख्य धुरी र प्लटको पृष्ठभूमि हुनेछ। के चरित्रलाई सार्ने छ र तिनीहरूलाई उनीहरूको कष्टको कारण बन्नको लागि विकसित गर्दछ (जुन प्राकृतिक र क्रुद्ध व्यवहार गरिनेछ)। यस विकासको विकासको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको विनाशकारी नतिजाको उपचार वा कम्तिमा एउटा कटु अन्ततर्फ झुकावको उपचार हुनेछ। चरित्रहरूको मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अन्धकार पनि दोहोरिने घटना हुनेछ, यद्यपि यो भयावह पक्ष अक्सर कोमल, अपमानजनक व्यक्तित्वको साथ हुनेछ। यस तरीकाले, वर्णहरूको औपचारिक वा शारीरिक कन्फिगरेसन र तिनीहरूको आन्तरिक ब्रह्माण्ड बीचमा उपस्थिति र असंगतिहरू खेलाइनेछ। वास्तवमा, ती अक्षरहरू जुन स्पष्ट रूपमा हानिरहित छन् खतरनाक, मकाब्रे पृष्ठभूमि हुनेछ। दुष्ट र शैतानको सन्दर्भ पनि दोहोरो द्वन्द्वात्मक रूपमा खेल्न व्यापक प्रयोग हुने छ। राम्रो र नराम्रो, प्रेम र डर, ती आवश्यक तत्त्वहरू हुनेछन्। डा। Caligari को मन्त्रिपरिषद यसको एक राम्रो उदाहरण हो।
एक साथ परिदृश्य संग, यो एक अर्थ अभिव्यक्त स्तम्भहरू पार उत्कृष्टता को गठन गर्दछ। केप, टोपी, गब्लेटहरू, सेतो श्रृंगार र क्विर्की वस्तुहरूले मानव अवधारणा, भावनाहरू र आयामहरू व्यक्त गर्न सही वाहनको रूपमा काम गर्दछन्। बनावट महत्त्वपूर्ण हुनेछ र त्यसरी नै सेटहरूमा प्रोट्रुसन र ईन्डेटेसनहरू छन्, हाम्रो पात्रहरूको छालाले पनि यसलाई गर्छ।
हामीले पर्याप्त नाटकीय प्रतिनिधित्व र अभिनय निर्देशन फेला पार्‍यौं। पात्रहरूको आन्दोलनको तीव्रता, बढाइबढेको गेस्टेसन, कोरियोग्राफिक उपचारका साथै प्रोक्सिमिक्स र कैनेसिकहरू सहितका खेल चरममा पुर्‍याइनेछ। कठोरता, शक्ति र सफा भावनाहरू जुन कुनै प्रकारको दमन बिना बाहिर आउँदछन् ट्रम्प कार्ड हो जुन भावना र कथाको सीमाहरूको माध्यमबाट हाम्रो सबैभन्दा उदास नायकहरूको नेतृत्व गर्दछ।
प्रतीक विज्ञान लाइट र गाढा जस्तो क्लासिक अवधारणा अपनाउँछ। अन्धकार, कालो र उदासिनले धम्कीको मुखमा बोल्ने छन्, जोखिमको शगको रूपमा, त्रासको घनत्व वा विकृति पनि। प्रकाश दुर्लभ अवसरहरूमा प्रेम भावनाहरू जस्तै शान्त भावना जस्तै व्यवहार गर्न देखा पर्दछ। चरित्रको छाया उनीहरूको हेयडेमा प्रकट हुनेछ, भित्ताहरू, राक्षसहरू, शक्ति र इतिहासको बारेमा ज्ञान पूर्ण swarming। उदाहरणहरू? १ 1916 १ of को स्प्याटर वा डा कैलिगारीको क्याबिनेट।
टिम बर्टन र अभिव्यक्तिवाद
जर्मन अभिव्यक्तिवादको सबैभन्दा विशिष्ट तत्वहरूको विश्लेषण पछि, हामीलाई महान टिम बर्टनमा यसको कडा प्रभावको बारेमा कुनै शंका हुनेछ। लाइट र छाया, सिल्हूटहरू, पूर्णतया भ्रमात्मक परिदृश्य, कम कोणको शटको प्रयोग, गाढा अक्षरहरू ... यहाँ भिडियो फाराममा यी सबैको प्रमाण छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » टिम बर्टनको काममा सिनेमामा जर्मन अभिव्यक्तिवाद र यसको प्रतिबिम्ब
फोटोग्राफरहरूको लागि must पुस्तकहरू हुनुपर्दछ
फोटोग्राफरहरूका लागि आधारभूत: लेन्स कक्षा